इजरायल जानेको स्वास्थ्य परिक्षणका लागि चार अस्पताल, कुन-कुन ? - ramechhapkhabar.com
इजरायल जानेको स्वास्थ्य परिक्षणका लागि चार अस्पताल, कुन-कुन ?
वैदेशिक रोजगार विभागले इजरायलको रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि चार वटा अस्पताल तोकेको छ । विभागले स्टार हस्पिटल जाउलाखेल, मेडिसिटी हस्पिटल भैसेपाटी, ह्याम्स हस्पिटल मन्डिखाटार र मनमोहन मेमोरियल हस्पिटल स्वंम्भु तोकेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न करोडौं लगानी गरी वर्षेनी राजस्व बुझाउँदै आएका स्वास्थ्य संस्थाहरूले भने इजरायलको रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने अनुमति पाएनन् ।
विभागले स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र र राहदानी पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना अनिवार्यरूपमा पेश गर्नुपर्ने बताएको छ ।
अमेरिका पुगिन् जापानको राजपरिवार छाडेकी माको
जापानकी पूर्वराजकुमारी माको आइतबार अमेरिका पुगेकी छिन्। सामान्य परिवारका केई कोमुरोसँग विवाह गरेर राजकीय परिवारको सदस्य पद गुमाएकी माको आफ्ना पतिसँगै अमेरिकी पुगेकी हुन्। आइतबार बिहान माको जापानबाट अमेरिका प्रस्थान गरेकी थिइन्। उनीहरु अब न्युयोर्कमा भाडाको अपार्टमेन्टमा बस्नेछन्।
कोमुरो न्युयोर्कको एक ल फार्ममा काम गर्छन्। जापानको कानुनअनुसार राजकीय महिलाले सामान्य नागरिकसँग विवाह गरे उनीहरुको पद गुम्नेछ। आइतबार बिहान अमेरिका छाड्नुअघि विमानस्थलमा उनीहरुको सुरक्षाको लागि ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो।
न्युयोर्कमा पनि उनीहरुको सुरक्षाको लागि सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो। लामो समयदेखि उनीहरु अमेरिका जान सक्ने अनुमान गरिएको थियो। माको र कोमुरोको जोडीलाई बेलायतका राजकुमार ह्यारी र मेघनसँग तुलना गर्ने गरिएको छ। ह्यारी पनि राजपरिवार छाडेर अहिले अमेरिकामा बस्दै आएका छन्।